Didin’ny HCC : Nangata-panazavana ihany koa ny Antenimieran-doholona -
AccueilSongandinaDidin’ny HCC : Nangata-panazavana ihany koa ny Antenimieran-doholona
Didin’ny HCC : Nangata-panazavana ihany koa ny Antenimieran-doholona
01/06/2018 admintriatra Songandina 0
Aleo manontanitany foana, toa izay manaotao foana. Manoloana ny didy navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC), ny 25 mey lasa teo, dia manao rano lava ireo fangataham-panazavana tonga eny anivon’ity andrim-panjakana ity ny amin’ny fampiharana ireo andininy sasany amin’izany didy izany. Nangata-panazavana mikasika io didy io ihany koa ny Antenimeiran-doholona, ary omaly no nanateran’izy ireo izany tetsy Ambohidahy.
Anisan’ny notsindrian’ny loholona Riana Andriamandavy VII ny ahiany amin’ny tsy fitovian-kevitra amin’ny fandraisana ny didin’ny HCC. Andininy iray ahitana taratra ny fifangaroan’andraikitra ny voalazan’ny andiany faha-4 sy faha-12 amin’io didy io, izay mety hitarika tsy fanajana ny fisaraham-pahefana eo amin’ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Toa izany koa no fifanoherana eo amin’ny andiany faha-54 amin’ny lalàm-panorenana mikasika ny fahefan’ny filohan’ny Repoblika amin’ny fanendrena Praiminisitra. Ny didy navoakan’ny HCC dia manery ny filohan’ny Repoblika ankehitriny hanendry ny praiminisitra sy handrava ny governemanta, nefa ny làlam-panorenana dia milaza fa « tsy afaka manala ny praiminisitra ny Filoham-pirenena raha tsy misy hadisoana goavana nataony na nametra-pialana ilay praiminisitra… »
Ho an’ity loholoha ity dia mifanohitra ihany koa ny andininy faha-14 amin’ny didin’ny HCC ny amin’ny tsy maintsy hirosoana amin’ny fifanarahana politika sy ny fanendrena praiminisitra ao anatin’ny 7 andro.
Tsiahivina fa efa nanatitra ny taratasy fangataham-panazavana teny anivon’ny HCC ihany koa ny teo anivon’ny fiadidian’ny repoblika.
Antanimena : Nisy naka an-keriny ny tompon’ny bijouterie Khalidas
Amin’ny fiandohan’ny taona tahaka izao, dia matetika hisehoana raharaha kidnapping foana eto an-drenivohitra. Lehilahy karana 70 taona, tompon’ny “bijouterie Khalidas” etsy Andohan’ Analakely ampitan’ny tobin’ny miaramila indray no lasibatra tamin’ity asa ratsy ity omaly hariva ...Tohiny
13 Mei : Fanoherana ala-bato
Depiote Jean Michel Henri : Mampiady ny mponina any Androy